စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ Among Us ဂိမ်းရဲ့ နောက်ခံဇာတ်လမ်းအကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း – Gaming Noodle
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ Among Us ဂိမ်းရဲ့ နောက်ခံဇာတ်လမ်းအကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
မကြာသေးမီက ခေတ်စားလာခဲ့ပြီး ကစားရရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ Among Us ဂိမ်းအတွင်းက အရောင်စုံ ဂိမ်းဇာတ်ကောင် လေးများကို လူအတော်များများမြင်ဖူးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီဂိမ်းတွင်း ဇာတ်ကောင်လေးများအနက် crewmate များက ဘာလို့ task တွေ လုပ်ဆောင်နေရလဲဆိုတဲ့​အကြောင်းအရင်းနဲ့ imposter များက ယင်းတို့ကို ဘာလို့လိုက်လံအန္တရာယ်ပြုရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရင်းများကို သိရှိနိုင်ပေမဲ့ နောက်ခံဇာတ်လမ်းကို​တော့ ထည့်သွင်းထားခြင်း မရှိပါဘူး။
Among Us ဂိမ်းအတွင်းက task အတော်များများမှာ တိကျပြီး နားလည်ရလွယ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်များရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ပြင်ပကမ္ဘာမှ လူများအနေနဲ့ အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ အောက်ဆီဂျင် လိုအပ်သလို Among Us ထဲက crewmate များအနေနဲ့လည်း လိုအပ်တဲ့ပုံစံပြုလုပ်ထားပြီး အာကာသယာဉ်ကြီးမှာရှိတဲ့ အောက်ဆီဂျင်စက်များ ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်အောင် သန့်ရှင်းပေးရတာမျိုးပါ။\_
Among Us ရဲ့ task များ၊ map trailer များ၊ team DLC page များ၊ Among Us ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် စတာတွေပေါ်မှာ ဂိမ်းတွင်းအကြောင်းအရာ အမြောက်အများ ပါဝင်တဲ့အတွက် ယင်းတို့ကိုပေါင်းစပ်ပြီး ခန့်မှန်းကြည့်ရသလောက် Among Us ရဲ့ နောက်ခံအကြောင်းအရာများကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ကြပါတယ်။
Imposter များဟာ ပုံစံပြောင်းနိုင်ပြီး ကပ်ပါးနေထိုင်တဲ့သဘာဝရှိတဲ့ ဂြိုဟ်သားများပါ။
Imposter များဟာ အမှောင်ထဲမှာလည်း မြင်နိုင်ပါတယ်။
Imposter များအတွက် အောက်ဆီဂျင်ရှိဖို့မလိုတာဖြစ်နိုင်သလို အောက်ဆီဂျင်ပြတ် အသက်အသေခံပြီး crewmate များကို ရှင်းလင်းဖို့ ကြိုးစားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
MIRA ဌာနချုပ် သို့မဟုတ် Polus သုတေသနဌာနက ကို crewmate များ မရောက်ခင်တည်းက Skeld အာကာသယာဉ်ပေါ်ကို imposter များရောက်ရှိနေကြတာပါ။
Crewmate များဟာ အရပ် ၃ ပေ ၆ လက်မ စီသာရှိပြီး အလေးချိန် ၉၂ ပေါင်စီရှိပါတယ်။
Crewmate များ အားလုံးဟာ MIRA လို့ခေါ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းကြီးအတွက် အလုပ်လုပ်နေကြတာပါ။
Crewmate များဟာ ဂြိုဟ်သားများအကြောင်းနဲ့ တွင်းထွက်တူးဖော်ရေးတို့ကို လေ့လာနေကြသူများဖြစ်ပါတယ်။
Crewmate များဟာ imposter များ ရန်ကနေ ကင်းလွတ်ပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်းဆီပြန်လာဖို့ မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။
Skeld လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ အာကာသယာဉ်ကြီးဟာ MIRA ဌာနချုပ်နဲ့ Polus သုတေသနဌာနကြား ကူးသန်းသွားလာဖို့ အဓိကအသုံးပြုပါတယ်။
အာကာသအတွင်းမှာ လူသားတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သွားလာနေကြပါပြီ။
Crewmate များဟာ အချင်းချင်းသင့်မြတ်ပြီး လူမှုဆက်ဆံရေးအရလည်း ကောင်းမွန်ကြပါတယ်။
MIRA ဌာနချုပ်ရဲ့ Process Data task မှာ ပါဝင်တဲ့ ကွန်ပြူတာပေါ်မှာ သစ်ပင်များနဲ့ ပန်းများရှိတဲ့ လမ်းလေး တစ်ခုအတွင်း crewmate တစ်ဦးပြေးလွှားနေတာကို ပြသထားပြီး ဒါဟာ crewmate များအတွက် ယင်းတို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့ နေရာကို လွမ်းမောသတိရစရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Crewmate တွေဟာ သုတေသနပညာရှင်တွေလား နယ်မြေကျူးကျော်ပစ္စည်းရှာဖွေသူတွေလား?
ဒီအခြေအနေများကို စုပေါင်းသုံးသပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် crewmate များရဲ့ Skeld အာကာသယာဉ်ကြီးဟာ MIRA ဌာနချုပ် သို့မဟုတ် Polus သုတေသနဌာနကို သွားနေစဉ် အသွင်ပြောင်းဂြိုဟ်သား imposter များရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို ခံရတာပါ။ ထိုစဉ်အတွင်း MIRA ဌာနချုပ်နဲ့ Polus သုတေသနဌာနမှာ imposter များရှိနေပြီသားလား Skeld ကနေ တစ်ဆင့် imposter တွေရောက်ရှိသွားတာလားဆိုတာကတော့ တိတိကျကျမသိရပါဘူး။
Crewmate များဟာ ပုံပန်းသွင်ပြင်အရလွန်စွာဆင်တူလို့ မွေးချင်းအရင်းများဖြစ်နိုင်သလို မျိုးရိုးဗီဇပြုပြင်ပြီး ဖန်တီးခံထားရတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသွင်ပြောင်းဂြိုလ်သား imposter ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို ခံနေရကြောင်း သိနေတာတောင် လုပ်လက်စအလုပ်များကို မရပ်တန့်လိုက်ခြင်းက ထူးခြားလှပါတယ်။
Crewmate များဟာ ဂြိုဟ်သား artifact များနဲ့ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများကို လေ့လာနေကြတာမို့ သုတေသနပညာရှင်တွေဖြစ်တာကတော့ ထင်ရှားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ သယ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းများနဲ့ ပြုလုပ်နေတဲ့စမ်းသပ်ချက်များအရ ယင်းတို့ရဲ့ တာဝန်ဟာ တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေရှာဖွေဖို့သက်သက်မဟုတ်ပဲ အခြားအချက်များရှိနေပါသေးတယ်။
Crewmate တွေဟာ ဂြိုဟ်သားတွေရဲ့ ရှေးဟောင်းရတနာတစ်ခုကို ယူဆောင်လာခဲ့လို့ တိုက်ခိုက်ခံရတာလား?
Assemble Artifact task အတွင်းက ကျိုးပဲ့နေတဲ့ crystal ဟာလည်း Among Us ရဲ့ နောက်ခံအကြောင်းအရာ များအတွက် သဲလွန်စတစ်ခုပါ။ ယင်းဟာ ဂြိုဟ်သားတွေရဲ့ ရှေးဟောင်းရတနာ တစ်ခုဖြစ်နေနိုင်ပြီး crewmate များက ယူဆောင်လာခဲ့တဲ့အတွက် တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါအချက်သာမှန်ကန်နေရင်တော့ imposter များဟာ crewmate များကို အကြောင်းမဲ့သက်သက်လိုက်လံအန္တရာယ်ပြုနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုနိုင်မှာပါ။
Among Us မှာ နောက်ခံဇာတ်လမ်းကို တိတိကျကျဖော်ပြထားခြင်း မရှိတဲ့အတွက် လက်လှမ်းမီတဲ့အ​ကြောင်းအရာများအပေါ်မူတည်ပြီး ခန့်မှန်းပြခဲ့တာပါ။ အသစ်ထွက်ပေါ်လာမယ့် Henry Stickmin ပုံစံ map ထဲမှာတော့ crewmate နဲ့ imposter များရဲ့ နောက်ခံဇာတ်ကြောင်းအစစ်အမှန်များ ပါဝင်လာနိုင်တာမို့ ဆက်လက်စောင့်မျှော်ကြရဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Esports အကြောင်းအရာများနဲ့ သတင်းများကို Gaming Noodle မှ အမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။